Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda Qaraxyo ka dhacay degmooyinka Dharkeynleey iyo Huriwaa.
Diyaarad Drone ah oo ku dhacday Tooratooroow iyo Al Shabaab oo gacanta ku dhigay.
Dhageyso Qeybta 2aad :Barnaamijka Halgankii Imaam Axmed Gureey.
Koox Jihaadi ah oo sheegatay Weerar ka dhacay Bartamaha dalka Nigeria.
In Kabadan 20 isugu jira Turki iyo Maleeshiyaadka Dowladda oo dhimasho &dhaawac ku noqday qaraxii Afgooye.
Saturday June 29, 2019 - 16:49:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka laga helayo degmada Dharkeynleey ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu ka dhacay qarax lagu dilay mid kamida Ergadii soo xushay qaar kamid ah Xildhibaannada Baarlamaanka dowladda Federaalka.
Qarax maanta duhurkii ka dhacay xaafadda Macmacaanka ee degmada Dharkeynleey ayaa sababay dhimashada Xasan Juuni oo kamid ahaa Ergadii xildhibaannada kasoo xulay dhanka maamulka isku magacaabay Hirshabelle.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa sababay dhimashada Ergayga uu waxyeello xooggan gaarsiiyay gaari nuuca raaxada ah oo uu watay,
Dhinaca kale qarax xooggan ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamo katirsan dowladda Federaalka, qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa degmada Huriwaa iyo isgoyska Fagax ee magaalada Muqdisho.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda labadii qarax ee maanta ka dhacay degmooyinka Dharkeynleey iyo Huriwaa ee gobolka Banaadir balse lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxa dambe.
Al Shabaab Oo Weeraro saldhigyo lagusoo Afjaray ka fulisay degmada Afgooye [Warbixin].
Al Shabaab oo weerar cagmarin ah ku qaaday saldhiggii ciidanka dowladda ee Xaaji Cali Sh/dhexe.
Dagaallo iyo duqeymo 39 qof ku dhinteen oo ka dhacay Suuriya.
Al Shabaab oo Weeraray Dad Caddaan ah oo Macdan ka qodanayay Buuraha gobolka Bari.
Weeraro ciidamo katirsan dowladda lagu beegsaday oo ka dhacay Banaadir iyo Sh/Hoose.